Ity fakan-tsarimihetsika portable ity no farany indrindra amin'ny fahaiza-manao.
Miaraka amin'ny fitadidiana anatiny, azonao atao ny mitahiry sary sy horonan-tsary nalaina tsy mila asiana ordinatera. Ity fakan-tsarimihetsika avo lenta ity dia azo ampiasaina indroa ho toy ny mpamadika/scaler!
Safidy fifandraisana manankarena
QPC80H2 gooseneck document camera visualizer amin'izao fotoana izao no fakan-tsarimihetsika feno indrindra ao an-dakilasy. Ny fifandraisana VGA sy HDMI dia ahafahanao mirakitra horonantsary na sary. Ny fifandraisana dia manome fahafahana lehibe indrindra. Miaraka amin'ny safidy fampifandraisana maro, ny Qomo dia mitambatra mora amin'ny teknolojia an-dakilasy hafa.
bokotra mora sy manan-tsaina ary slot USB ao ambadika; Eo amin'ny ilany havia dia USB-A ho an'ny USB thumb drive ary USB-B slot ho an'ny fifandraisana PC
Ny sandrin'ny gooseneck dia manodidina ny 445 mm miaraka amin'ny gooseneck azo mihodina maimaim-poana amin'ny zoro samihafa
Port HDMI in/out maro amin'ny lafiny aoriana
VGA amin'ny sisiny sy ny fanitarana ny tongotra aoriana any aoriana
Eo amin'ny lohany ny mikrô. Noho izany dia tsy afaka mirakitra ny sary fotsiny ianao fa ny feo amin'ny firaketana video
Fakan-tsary 5MP miaraka amin'ny zoom 6xoptical ary zoom 10x digital. Naorina-in LED intelligent fanampin-jiro, rehetra-directional jiro, mba hamoronana mazava kokoa fampisehoana sehatra ny fahitana
Manao zavatra madinika ho lehibe kokoa noho ny fiainana
Ity fakantsary portable ity dia natao hojerena. Jereo ny zavatra amin'ny lafiny rehetra amin'ny fotoana tena izy na rehefa lavitra ianao amin'ny alàlan'ny firaketana horonan-tsary famaritana avo lenta, ary ento amin'ny ambaratonga manaraka ny zoom optika mahery vaika 6x amin'ny fampiarahana azy amin'ny mikraoskaopy.
Mitifitra habe A3
Miaraka amin'ny faritra scanning ambony indrindra amin'ny A3, azonao atao ny mijery izay rehetra ilainao ao an-dakilasy.
Izy io dia rindrambaiko fandraketana sary/annotation/video. Mifanaraka amin'ny Windows 7/10.Mac
Fitaovana tsotra sy fohy.
Mora ny manao ecran split ho an'ny fampitahana fampisehoana mavitrika sy static izay manampy betsaka amin'ny fampianarana. Ny mpianatra dia afaka manana fomba fijery mazava tsara momba ny maha-samihafa ny fampisehoana.
Ny fiasan'ny fanamarihana dia mahatonga anao hanazava mora foana izay tianao hozaraina amin'ny efijery.
Manaraka: QPC80H2 5MP fakan-tsarimihetsika optika ho an'ny efitrano fianarana marani-tsaina
teo aloha: Qomo HD USB Webcam ho an'ny lalao
Takelaka data QPC80H2